Ultrasonic tekinoroji inogona kuvandudza Apple Penzura | IPhone nhau
Iyo Apple Penzura yave iri, iri uye ichave iri yakanaka kwazvo tool yePads. Nekuda kwechigadzirwa ichi tinogona kuita kuwanda kwemabasa nepiritsi redu, kubva pakudhirowa kana kurongedza magazini kusvika pakutora manotsi mukirasi yeyunivhesiti. Nekudaro, zvese zvinogona kuvandudzwa uye ndizvo zvakaitawo Apple mumakore achangopfuura.
Iwo achangoburwa patent kunyorera kubva kuBig Apple inoratidza ruzivo rwekuti Apple ingavandudza sei stylus yayo. Zvingave pamusoro sanganisira ultrasonic tekinoroji mumidziyo skrini kugadzirisa kunyatso kubata kwekubata uye kurohwa kweApple Penzura, pakati pezvimwe zvakawanda zvinoshanda.
Patent inoratidza remangwana rakavimbika reApple Penzura
Ruzivo urwu runobva mukunyorera kunyoresa kwe patent mbiri nyowani Apple muUnited States Patent Hofisi. Mavara maviri epamutemo ane chekuita nekubatanidzwa kweiyo Ultrasonic tekinoroji pane zvishandiso. Wekutanga anoedza kuwedzera imwe dura pane zviyero zvemidziyo kuitira kuti igone kupa ruzivo kune mamwe madhizaini (mune ino Apple Penzura) uye, chechipiri, kuwedzera zvidimbu zvitsva zvezvinhu kuApple Penzura kuvandudza kudyidzana kwayo. nemasikirini.
Zvakare kutaura, uye sezvazvinogona kuonekwa mumifananidzo yakasungirirwa patents, iyo Apple Penzura inogona kuona ichishandisa ultrasonic tekinoroji mafambiro anoita mushandisi nechinyoreso kuitira kuti application igadzirise zviito zvayo, Semuenzaniso, kumonyanisa Apple Penzura kunogona kuita zvimwe gobvu sitiroko. Kune rimwe divi, kubatanidza ultrasonic tekinoroji mune iyo iPad skrini inogona kubvumira kuwedzerwa kweiyo 3D Kubata tekinoroji, pamusoro pekudyidzana neApple Penzura.
Aya ma patent anogona kuita kuti Apple ipe vanogadzira ruzivo rwakawanda nezve mashandisiro evashandisi Apple Penzura uye vanogona kuvandudza mashandisiro avo: kana mushandisi akabata chinyoreso kurudyi kana kuruboshwe, chinzvimbo chepenzura zvine chekuita nechidzitiro, inorerekera zvakanyanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Ultrasonic tekinoroji inogona kuvandudza Apple Penzura